🥇 ▷ Apple Watch, qaar ka mid ah waxyaabaha aadan adigu sameyn karin ✅
Apple Watch, qaar ka mid ah waxyaabaha aadan adigu sameyn karin
Baro 10-ka waxyaabood ee aadan ku sameyn karin Apple Watch-ka cusub
Sida aan ognahay, saacada smart ama smartwatch ee Apple, oo sidoo kale loo yaqaan ‘Apple Watch’, ayaa si rasmi ah u furmi doona bilaha soo socda oo si sax ah u noqon doona, Waxaa la rajaynayaa in la gaaro xilliga guga 2015. Dhanka kale, soosaarayaasha dalabka ayaa hadda ka shaqeynaya horumarinta barnaamijyadooda iyaga oo si buuxda uga faa’iideysan doona aaladda cusub. Si kastaba ha noqotee, aaladdaan Waxay yeelan doontaa soo koobitaankeeda waxaana jiri doona waxyaabo badan oo aadan sameyn karin, aan aragno waxay yihiin.
Nooca ugu horreeya ee Apple Watch wuxuu lahaan doonaa xadad badan
Nooca ugu horreeya ee Apple Watch Waxay u dhowdahay in la gaadho dhammaan isticmaaleyaasha waxaana jira durba macluumaad ku saabsan aaladdan oo naga caawin doonta inaan ogaanno waxaad samayn karto ama aadan sameyn karin. Kadib waxaan kugu dhaafaynaa qaar ka mid ah Waxyaabaha uusan Apple Watch sameyn karin.
Ma awoodi doontid inaad xoqdho
In kasta oo qaarkood u muuqan karaan kuwo cajiib ah, marka loo eego waxa la arkay, ugu yaraan hadda Apple ma saadaalinayso suurtagalnimada in adeegsadayaashu ay ku dhex wareegi karaan codsiyada barnaamijkooda smartwatch-ka cusub, ama riix fartaada shaashadda, sida aan ku sameyn karno iPhone ama iPad, ama annaga oo isticmaaleyna isugeynta dijitaalka ah.
Ku qasab Taabasho Capado oo loogu talagalay Soo-saareyaasha App
Marka loo eego waxa uu yidhi Apple, Force Touch waa shaqada dhexgalka ugu muhiimsan ka dib markii la abuuro Multi Touch. Tani waa heer cusub oo is dhexgalka u dhexeeya isticmaalaha iyo aaladda u saamaxaya saacaddu inay awood u leedahay inay garato heerka xoogga loo isticmaalo inuu ku cadaadiyo shaashadda. Muuqaalkaani, ee ku jira codsiyada qeybta saddexaad, kaliya wuxuu u adeegi doonaa inuu soo bandhigo muuqaalka guud.
Isgaarsiinta hal-dhinac ah
Wax kasta oo lagu muujiyo barnaamijka loo yaqaan ‘Apple Wach’ waxaa go’aamiya, horumariyo oo bixiya iPhone-ka, oo ay ku jiraan animations. Tani waxay ka dhigan tahay in Apple Watch Ma aha, oo ma sii jiri doono, muddo dheer, aalad awood u leh beddelka taleefanka.
Dhibaatooyinka kormeerka wadnaha
Qalabka dareemayaasha ee cabbira garaaca wadnaha ama kormeerka garaaca wadnaha, ee ku dhexjira saacadda Apple ayaa si buuxda oo gaar ah ula shaqeyn doona softiweerka iyo adeegyada Apple, kana hor istaagaya horumarayaasha inay ka faa’ideystaan ​​tan.
Gariir aan rabin
Wiilasha shirkadda Californian-ka waxay kujirtay Apple Watch mashiinka jawaab-celinta cusub ee taabashada kaasoo gariiraya amarrada ka dib, oo loo yaqaan Qalabka Mashiinka Maskaxda, lagumana heli karo codsiyada dhinac saddexaad, ilaa laga isticmaalo Isticmaalka Ogeysiinta Push. Qaybaha gariirka ee wiilasha Cupertino ay ku jiraan gaar ahaan qalabkooda cusub wuxuu noqon doonaa oo keliya gaar ahaan codsiyada Apple.
Fikrad ahaan, makarafoonka makarafoonka ee Apple wuxuu ka kooban yahay Qalabkan cusub waxaa loo adeegsan doonaa wada hadalka taleefanka iyo soo jeedinta Siri. Marka barnaamijyada kale kama faa’ideysan karaan makarafoonkan.
Bixinta chiC NFC
Sida iPhone iyo iPad-ka, chip-ka cusub ee NFC oo ay kuxirtay wiilasha Cupertino ee ku jira Apple Watch Ma noqon doonto marin loo marin doono codsiyada dhinac saddexaad.
Dejinta Codka Macaamiisha
Isticmaalayaasha Apple Watch ma awoodi doonaan inay habeeyaan dhawaqyada caadiga ah ee loogu talagalay ogeysiiska ama ogeysiiska, saacadda Apple wax walba waxay ku dhici doonaan gariirka, oo laga yaabo inaysan had iyo jeer u noqon digniin ku filan adeegsadaha.
Waqtigan xaadirka ah codsiyadu waxay ku shaqeyn doonaan Apple Watch iyada oo leh howlaheeda oo dhan. Tani meesha kama saareyso in mustaqbalka ay suurta gal tahay in iibsiyada In-App ay imaan karto iyo inay awoodaan inay furaan astaamaha horumarsan iyo u heellan gaar ahaan saacadda.
In kasta oo aysan tani dhibaato ahayn, waa run, kiiskan Apple Watch Waxay la shaqeyn kartaa hal iPhone oo keliya markiiba, sidaa darteed isku xirnaanta aalado dhowr ah ayaa isla markiiba la tuuraa.
Horaan u ognahay taas waa nooca ugu horreeya ee Apple Watch oo dabcan, wuxuu leeyahay faa’iidooyin iyo khasaarooyin. Waxa cad inay tahay muddo ka dib Apple Waxaad ku horumarin kartaa aaladda hab ay ku jiri doonaan qaabab cusub iyo xulashooyin, waxaan rajeyneynaa in badan oo kuwan ka mid ah kuwa kor lagu sharaxay.